May Nyane: June 2009
၂၀၀၉/၂၉ ထောင့်မကျိုးတဲ့ ကမ္ဘာ
ကျွန်တော်တို့ အစ်ကို့အတွက် ဆုတောင်းနေတယ်...။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ဆုတောင်းနေတယ်
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် လွတ်မြောက်ဖို့
၂၀၀၉ မှာ အစ်ကို့အသက် ၂၉ နှစ်ပြည့်ပြီ
အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချစ်မက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကတော့
ကမ္ဘာဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်တုန်းကမှမပြားသေးပါဘူး
အစ်ကိုကတော့ အမှောင်တိုက်ထဲမှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်
ကျွန်တော်တို့ က အလင်းတစ်ဝက် အမှောင်တစ်ဝက်
(မိုးလှိုင်ညရေ ... ကျည်ဆန်တွေပလူပျံနေတဲ့ ကောင်းကင်မှာ မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ ကလောင်သွားတွေက အသက်ခန္ဓာမြဲနေသရွေ့ ရေးသင့်တဲ့စာသားတွေကို ရေးခြစ်နေဦးမှာပါ ...။ ဓါးသွားထက် ကလောင်သွားက ပိုထက်တယ်တဲ့ ... ဒါဆို စစ်သေနတ်တွေထက်ရော ... ငါတို့ကလောင်သွားတွေ ပိုပြီးထက်မြက်နိုင်ဦးမလား ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမဲရောင် ကားချပ်မှာ တစ်ချက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် အလင်းစစ်တွေကို ငါတို့ ဆက်လက်ရေးခြစ်ကြမယ် ...။)
အစ်ကိုအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်၊ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်၊
(ဘားအံအကျဉ်းထောင်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်တော်မွေးနေ့ပွဲကျဉ်းပနေရတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်သို့)
at June 28, 20097comments:
ကျမတို့မိသားစု ဘယ်လို လွတ်မြောက်လာသလဲ.. လို့ သိချင်သူတွေ များတာကြောင့် (၄၂)ကို အတိုချုံးပြီး လိုရင်းရေးခဲ့ရတာ..။ တကယ်တော့ (၄၂)ရေးရမယ့် အပိုင်း… ဇင်းမယ်မှာ ခိုနေရတဲ့ ၃လနီးပါး (အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ)ဟာ တကယ့်ကို သည်းထိတ်ရင်ဖို ဆန်လှတာပါ။ အဲဒီအချိန်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရေးဖို့ တောင်းဆိုကြပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာ ဒါတွေကို အကျယ်မချဲ့ချင်တော့ပါဘူး။ ကျမစိတ်ထဲ အဲဒီ ကိစ္စဟာ ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စသာဖြစ်တယ်လို့ ထင်တာလေ။ ကျမတို့မိသားစု သူများနိုင်ငံမှာ ပုန်းခိုနေရတယ်ဆိုတာက လျှောက် အလည်အပတ်မပျက်.. မုန့်စားမပျက်.. ကလေးတွေ ကျောင်းတက်မပျက်..။ မဖြူဖြူသင်းတို့ နီလာသိန်းတို့ ပုန်းနေရတုန်းက အဖြစ်အပျက်မျိုး အခြေအနေမျိုးနဲ့ ယှဉ်တွေး ကြည့်လိုက်ရင် အရေးအရာ လုပ်ပြောစရာကို မဟုတ်ပါ။ တခုပါပဲ.. ကျမက ကျမကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတဲ့ သားသမီးတွေကိုပဲ သနား တာလေ။
နအဖစစ်တပ်ကနေ ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျမက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေရွာပြန် မိသားစုလို့ပဲ သတ်မှတ်ထား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လေးမှာ ခင်မင်းဇော်ကဆိုရင် ကျမတို့ မိသားစုတော့ သွားပြီ.. အင်းစိန်ထောင်ကို တန်းကနဲပဲ… လို့ တွေးပြီး အရုပ်ကြိုးပြတ် ဖြစ်နေတာ။ တကယ်ပါပဲ.. ဘယ်လို တွေးကြည့်ကြည့် လွတ်လာစရာအကြောင်းကို မရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ကျမတို့ သားရဲတွင်းထဲက လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ တလော ကျမနဲ့ ကလေး၃ယောက်ဟာ အဲဒီတောထဲရောက်သွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်ဆိုးကို ညတိုင်းလို အိပ်မက်တွေ ပြန်ပြန်မက်ပြီး လန့်လန့်နိုးခဲ့ကြတာ ညတိုင်းလိုလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အနာဂတ်ဆိုတာထက် ကျမကို ကူထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုပြန်ပေးရပါ့ဆိုတဲ့ အပူ.. ရှေ့လျှောက် ထိုင်းမှာ ဒီမိသားစုကြီး ဘေးမရှိ ရန်မရှိ နေသွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့အပူတွေ ဖိစီးလို့ပေါ့..။ Detention Center မှာ US Embassy က ကိုယ်စားလှယ် အာမခံပြီး လာခေါ်တာတောင် မပေးတဲ့ ထိုင်းအင်မီဂရေးရှင်းက ကျမတို့ တပြုံလုံးကို နောက်တကြိမ် အလွတ်ပေးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
သံရုံးက ဗီဇာကို နောက်ထပ် ၆လ extension ပေးထား.. လေယာဉ်လက်မှတ်ကလည်း အကန့်အသတ်မရှိ ရက်ရွှေ့ပေးထား..။ သူငယ်ချင်းတွေက အမျိုးမျိုး အားပေး..။ သံရုံးဘက် ကလည်း ဘယ်လို ကူရပါ့မလဲ စဉ်းစားနေကြ..။ ကျမကတော့ စိတ်ကို တ၀က်လောက် လျှော့ထားပြီး ထိုင်းမှာ ရေရှည်နေရေးကို တခုခု ပြန်စီစဉ်ဖို့ပဲ စဉ်းစားနေမိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့… အဲဒီ ရက်တွေထဲမှာပဲ ကျမတို့ နောက်တကြိမ် ပြန်ထွက်ဖို့ မီးစိမ်းလေးတချက်က လက်ကနဲပြ..။ အဲဒီမီးစိမ်းကို ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပေမဲ့ ပြောပြလို့ မရတာမို့ အင်မတန်ကို စိုးရိမ်ပူပန်စရာ.. ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းလှစွာနဲ့ ဖြတ်ခဲ့ရတယ် လို့သာ သိထားလိုက်ပါတော့။ တချိန်ချိန်တော့ ကျမ အသေးစိတ် ပြောပြ နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ကျမရဲ့ သောကစိတ်ကို အမြဲအားပေးအားမြှောက် လုပ်တတ်တဲ့ သားကြီးကတောင် ဒီတခါတော့ သိပ်အားမပေးချင်။ ခင်ပွန်းသည်ကလည်း မျက်နှာ အပျက်ပျက်..။ ဟိုတခါလို လေယာဉ်ကွင်းမှာ ထောင်ဖမ်းတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင်.. ဒီတခါတော့ အပြီးပဲလို့ ကျမ ပြောတော့ မိသားတစုလုံး တိတ်ဆိတ်..။ ကျမကိုလည်း သူတို့ မလွန်ဆန်နိုင်ကြ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အားပေးတယ်။ ဒီတခါတော့ ဟိုတခါလို အဖြစ်မခံတော့ဘူးတဲ့။ ပြောသာပြောတာ.. ဟိုတခါလည်း အဲလို ပြောရင်းသားကကို နအဖတပ်ထဲထိ ဒုတ်ဒုတ်ထိ ရောက်သွား ခဲ့တာပဲလေ..။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ထပ်ကြိုးစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့က ခရစ္စမတ်နေ့မို့ ထင်ပါရဲ့.. ဇင်းမယ်လေဆိပ်ရဲ့ ည ၈နာရီက လူသူ ရှင်းလွန်းနေတယ်။ ဆောင်းည အေးအေးမှာ ကျမကတော့ ဇောချွေးတွေ ပြန်နေခဲ့တယ်။ ကျမရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကလည်း ပုံမှန်မဟုတ်။ တကယ့်ကို ၀ုန်းဒိုင်း ကျဲနေခဲ့တာ။ သားကြီးနဲ့ ကလေးတွေအဖေခမျာလည်း မျက်နှာပျက် တိတ်ဆိတ်။ အငယ်လေး ၂ယောက်ကတော့ နားမလည်တော့ စကားတွေ များနေကြ။ လေကြောင်းလိုင်းက တာဝန်ကျ ကောင်မလေးက ကျမတို့ရဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို အသေးစိတ် စစ်နေတယ်။ မိသားစု ၅ယောက် ဆိုတော့လည်း အကြာကြီးပေါ့..။ Check in ပြီးတော့ အင်မီဂရေးရှင်း..။ ဘုရားရေ.. အင်မီဂရေးရှင်းက ကောင်လေးက တကယ့်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ.. လေဆိပ်အထွက်အတွက် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေ ထုးစံအတိုင်း ရိုက်တယ်..။ ပြီးပြီ .. သွားတော့တဲ့။ ကျမရဲ့ လက်ဖ၀ါးတွေ အေးစက်..။ တကယ်ပဲလား.. အဲသလောက် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကျမတို့ မိသားစုကြီးကို ပေးထွက်သလား။
အဲဒီအချိန် ကျမရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတစုက ဇင်းမယ်ရဲ့ တနေရာမှာ ဆုံပြီး ရှိနေကြ..။ ကျမဆီက ဆက်လာမယ့် ဖုန်းသံကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ နားစွင့်နေကြတယ်တဲ့။ တခုခုဟေ့ဆို သူတို့ အမြန်ဆုံး လိုက်ကြမှာလေ..။ ဟော.. ခုတော့ ကျမတို့ Departure Gate ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တကယ် ဖြတ်ခဲ့ကြပြီ။ နောက်တော့ လေယာဉ်ဘီးတွေကြွမှ.. ကျမရဲ့ အားအကိုးဆုံး အကိုတယောက်ဆီ ကမန်းကတမ်း ဖုန်းခေါ်.. “ကျမတို့ ဇင်းမယ်ကနေတော့ လွတ်ပြီ ဆရာရေ….” လို့ သတင်းပေးရတယ်။ သူ့ခမျာလည်း အေးဗျာ… တဲ့။ စိတ်တ၀က် အေးသွားတဲ့ အသံနဲ့။ အဲဒီကနေ ဘန်ကောက်.. သုဝဏ္ဏဘုမ္မိလေဆိပ်..။ စိတ်က ဒုံးဒုံး မကျသေး။ အဲဒီမှာလည်း လေယာဉ်ဘီးတွေ အကုန်ကြွမှပဲ စိတ်တ၀က်အေးရပြန်တာပါ။ အဲဒီတော့မှပဲ မောင်နေလင်းဆီ we are leaving လို့ Text Message ပို့ရတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဂျပန် Narita လေဆိပ်မှာ Transit ။ လမ်းတလျှောက်.. အချိန် ကမောက်ကမ ဖြစ်တာတွေ.. သားငယ်နဲ့ သမီး ခရီးပမ်းတာတွေထဲ ပင်ပန်းပေမဲ့ ကျမ စိတ်အေးလက်အေး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ Dulles လေဆိပ်။
US ကို အ၀င်မှာတော့ ကျမ သိပ်စိတ်မပူတော့ပါဘူး။ ကျမတို့ စာရွက်စာတမ်းတွေက အခိုင်အမာလေ..။ တကယ်လည်း ကျမ သိပ်မပူသလိုပဲ.. အမေရိကန်အ၀င် အင်မီဂရေးရှင်း ကို အင်မတန် ချောမောလွယ်ကူစွာ.. ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးမှ လာကြိုနေမယ့် သားနေလင်း ဆီ… ပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ အနှုတ်ကနေ ပြန်စရတဲ့ နောက်ထပ်ဘ၀သစ်တခုဆီ.. ရောက်လာပါ တော့တယ်။ မောင်နေလင်းမောင်းလာတဲ့ ကားပေါ်ကနေ ဘေးဝဲယာကို ကြည့်ရင်း လိုက်လာ ချိန်မှာ ကျမတွေးနေမိတာက ကျမတို့ရဲ့ အံ့သြထိတ်လန့်စရာကောင်းလှတဲ့ အရင်းအနှီး ကြီးလှတဲ့ ဒီင်္ ဒုတိယအကြိမ် စွန့်စားခန်းကိုပါပဲ။ လောင်းကစားဆန်ဆန်ပြောရရင် ကျမ တကယ့်ကို ကံကို စမ်းသပ်ဖို့ ပုံအောလောင်းခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်လို့များ လွဲချော် သွားခဲ့ပြန်ရင်..။ တမိသားစုလုံး နအဖရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ။ သားသမီးတွေ လူညွန့်တုံး။ ကျမတို့တွေ ဘ၀ဆုံးကြရမှာ။ ကျမဘာလို့ ဒီလောက် အရဲကိုး စွန့်စားခဲ့ပါလိမ့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်လောက်အောင် ခံစားရမယ့်အဖြေမျိုးလည်း ထွက်နိုင်ခြေများတဲ့ လောင်းကစားတခုကို ကျမ လုပ်ခဲ့တာပါ..။ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကျမရဲ့ တဇွတ်ထိုး... အရဲကိုးစိတ်..။ နောက်တခုက ကျမကို အစွမ်းကုန်ကူကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ယုံတဲ့ စိတ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကျမတို့ ဒီတကြိမ်မှာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ကံကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိက က ဆောင်းလေအေးစက်စက်ကြီးနဲ့ ဖြန်းကနဲ လှမ်းပက်ပြီး ကြိုဆိုခဲ့ပေမဲ့ ကျမကတော့ လုံခြုံရာ အရပ်မှာ အေးချမ်းမယ့် နိမိတ်ပဲလို့သာ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
ဒီမြေဟာ ကျမချစ်တဲ့ ဇာတိမြေနဲ့.. ကျမရဲ့ အမေအိုကြီးနဲ့.. ကျမ ချစ်မက်စွဲလန်းတဲ့ မြသီလာနဲ့ အဝေးကြီးပါ။ ဒီမြေမှာ ကျမ မပျော်နိုင်တာလည်း ကြိုသိပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမြေမှာ ကျမ ကလေးတွေအတွက် အခွင့်အလမ်း တွေ ရှိမယ်..။
ကျမအတွက် ကျမ ထပ်ဆည်းပူးချင်တဲ့ ပညာတွေကို ဆည်းပူးနိုင်မယ်..။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် တချိန်မှာ တခုခု ပြန်ဖြည့်ဆီး ပေးနိုင်ဖို့ လိုတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ဒီမြေမှာ ပျိုးထောင် ယူနိုင်မယ်..။ အနည်းဆုံး ကျမ တို့မှာ ကြိုးစားခွင့်တွေ ရှိမယ်..။ အဲဒီအခါ ဒီ မြသီလာနဲ့ အဝေးမှာ.. ကျမ ဘယ်လို တန်ဖိုးတွေ ကို ဆောက်တည်နိုင်မလဲ.. ဘယ်လို အခွင့်အရေးတွေကို ရှာဖွေမလဲ.. ဘယ်လို အခွင့်အလမ်းတွေကို အသုံးချမလဲ..။
ကျမ တွေးနေမိပါတယ်။ လူတွေ ကိုယ့်အမိမြေနဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး.. စိတ်တွေနီးနီး ရှိနေဖို့က အရေးကြီးတယ် လို့..။ အဲဒီအခါ မြသီလာနဲ့ အဝေးမှာ ကျမ ချစ်တဲ့ ဇာတိမြေနဲ့ နီးအောင် ကျမ ဘာတွေ လုပ်မလဲ.. ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ.. ဘာတွေကို ဖြတ်သန်းမလဲ..။ သေချာတာကတော့ ကျမ ကိုယ့်ရဲ့ Identity မပျောက်ပျက်ဘဲ တစုံတရာ တန်ဖိုးရှိအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံပါတယ်။ အဲဒီအခါ မြသီလာနဲ့ အဝေးကြီးမှာ… ထပ်စရတဲ့ ဘ၀ အသစ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ.. သင်ခန်းစာတွေကလည်း ကျမအတွက်တော့ စာရေးစရာ အဖိုးတန်တဲ့ ကုန်ကြမ်း တွေပဲပေါ့။
အနောက်တိုင်းရဲ့ အလိုအရ ဘ၀စတယ်ဆိုတဲ့ အသက် ၄၀ ပြည့်တဲ့ နှစ်မှာ ကျမ ဘ၀အသစ် တခုထဲကို ဗြုန်းကနဲ ခုန်ချခဲ့တာ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို စွန့်ပြီး ခြေမဲ့လက်မဲ့ ထွက်ခဲ့တာ..။ ဘာလိုလိုနဲ့ နောက်ဘ၀တခု အသစ်ပြန်စတော့ ကျမ အသက်က ၄၄နှစ်ထဲမှာ။ ချန်ထားခဲ့ရတဲ့ ၄၃နှစ်ကာလထဲမှာတုန်းကတော့ တကယ့်ကို ပင်ပန်းတကြီး။ ခု ၄၄နှစ်ပြည့်ရမယ့် ၂၀၀၉ ရဲ့ ဇန်န၀ါရီမှာလည်း ခြေဗလာ.. လက်ဗလာ..။ လောလောဆယ်တော့ ကျမက သားနေလင်း ကူညီ နေရာချပေးတဲ့ နေစရာအသစ်လေးမှာ နောက်ထပ် နေရာအသစ်.. အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ပြန်စ..။ အားလုံးဟာ တကယ့်အသစ်.. စိန်ခေါ်မှုတွေ တသီတတန်းကြီးနဲ့.. လေ့လာ သင်ယူရမှု အားထုတ်ရမှု အသစ်တွေနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးနဲ့ ကံကောင်းပူးတွဲပြီး အမြဲကြုံနေရကျ ကျမ.. ခု မြသီလာရဲ့ အဝေးမှာလည်း ကျမကို ပုံအောကူညီတဲ့ မောင်နေလင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူ.. တကယ့်ကို ၀ိုင်းကြ၀န်းကြသူတွေက ကျမအနားမှာ ၀န်းရံလို့။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ.. မောင်နေလင်းတို့က အိမ်ငှားပေး.. သူငယ်ချင်းတွေက လိုတဲ့ အိမ်ပစ္စည်းတွေ ၀ိုင်းဖြည့်ကြ။ (တချို့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေဆိုရင် သုံးတောင် မသုံး တတ်အောင် အဆန်းတကြယ်တွေ :P) အ်ိမ်လခ စိုက်ထားပေးတဲ့သူနဲ့။ (အဲဒီ အ၀ိုင်းအ၀န်းလေးကို ကျမ ဘယ်တော့မှ မမေ့… ပြီးတော့ မေ့လို့လည်း မဖြစ်)။ တကယ့်ကို ကျမ သိပ် မပူပင်လိုက်ရဘဲ စိမ်းမြမြ ဒေသလေးမှာ ဘ၀သစ်ကလေး တခုကို ဟန်ကျပန်ကျ စနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့ နယ်မြို့လေး တွေကို နှစ်သက်တတ်တဲ့ ကျမအတွက်တော့ Maryland ဟာ မေမြို့နဲ့တူတဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိတဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ မြို့ကလေးပါ..။ ပြီးတော့ ဗမာပြည်သားတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ မြို့။ ပြီးတော့ ကျမ ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ မန္တလေး ပန်တျာကျောင်းအုပ်ကြီးဟောင်း ပန်းချီဆရာ စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းဖေနဲ့ ၅မိနစ်ပဲ ကားမောင်းရတဲ့ နေရာမှာ ကျမ နေခွင့်ရတဲ့ မြို့..။
မုန်တိုင်းနောက်က လေပြေညင်း.. ဆိုပေမဲ့ လေညင်းလေး သာယာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ မုန်တိုင်းရဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် လေးတွေ.. ခြေစလက်စလေးတွေနဲ့ မှတ်စရာ သားစရာလေးတွေတော့ ရှိသေးသပေါ့လေ။ အဲဒါတွေကိုတော့ မြသီလာရဲ့ အဝေးမှာ… ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆက်ရေးသွားမယ် စိတ်ကူးထားပါတယ်။
at June 27, 2009 24 comments:
အန်တီစု.. ၆၄နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဆုတောင်း
အကျဉ်းအကျပ် အချုပ်အနှောင်ထဲကနေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပြီး အသက်ရှည်ရှည် အနာမဲ့မဲ့ စိတ်လက်ချမ်းသာ ဘယာကင်းပါစေ..။ လွတ်လပ်သော မြန်မာပြည်ကို သူချစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ပါစေ..။
at June 19, 2009 13 comments:
(ပုံထဲက အချုပ်ခန်းဟာ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုအပြီးမှာ အန်တီစုကို ထားခဲ့တဲ့ အင်းစိန်ထောင်ထဲက အချုပ်တိုက်လို့ ပြောပါတယ်)
Or hold me if i need to weep
Or maybe it's not the season
Or maybe it's not the year
Or maybe there's no good reason
တကယ်လို့ ငါငိုမယ်ဆိုရင် ထွေးပွေ့ထားပေးပါ။
ငါ့ငွေလမင်းက ပိုတောက်ပလေလေ.. သူတို့ ငါ့ညတွေကို အမှောင်ချထားချင်လေလေပေါ့…
ပြတင်းပေါက်ဘေးက တေးမသီတဲ့ စန္ဒယား။
တယောက်ထဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ရင်ထဲမှာတော့ တေးသီနေ။
တစ်ယောက်ယောက် သူမကို ပြန်ခေါ်လာပေးပါ။
So why've i been here so long?
နှစ်များစွာ သော့ခတ်ပိတ်ထားပေမဲ့ သံစဉ်တွေ ရှင်သန်နေဆဲ
ငွေလမင်းရဲ့  ပြောင်းလဲနေမှုအောက် လတ်ဆတ်ခြင်းကင်းမဲ့ အခန်းထဲမှာ
ပြတင်းပေါက်တွေ ရှိပေမဲ့ မလင်းပွင့်နိုင်ပါဘူး..
သူတို့ ငါ့ကို လွှတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူထုကိုသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါ။
ငါ့မှာ ဘာမှ ဖုံးကွယ်ထားစရာ မရှိ။
ဘာကြောင့် ငါ့ကို ကာလကြာရှည် ချုပ်နှောင်ထားသလဲ…
ပြတင်းပေါက်ဘေးက တေးမသီတဲ့ စန္ဒယား
တယောက်တည်း တိတ်ဆိတ်စွာ ရင်ထဲမှာတော့ တေးသီနေ
Unplayed piano (bring her home)
Still holdsatune(bring her home)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အားလပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ စန္ဒယားတီးလေ့ရှိပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆင်းရဲသောကကို ပြည်သူလူထုနဲ့ထပ်တူ ခံစားနေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စန္ဒယားတီးနိုင်ပါဦးမလား..။ ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကရော တေးမသီနိုင်တဲ့ စန္ဒယားဖြစ်နေလေမလား..။ အဲဒီစန္ဒယားဟာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပျံ့အောင် ခွန်အားရှိတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး တေးသီချင်းတွေ သီကြွေးခဲ့တဲ့ စန္ဒယားပါ။ အဲဒီ စန္ဒယား ပြန်ပြီး တေးသီနိုင်ဖို့ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ….။ Damien Rice ကတော့ 'Somebody bring her home' တယောက်ယောက်က သူ့ကို ပြန်ခေါ်လာပေးပါ.. လို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်..။
(၁၁ဇွန် ကြာသပတေးမနက်က VOA မြန်မာပိုင်းမှာ လွှင့်ခဲ့တာပါ ။ ဒီသီချင်းဘာသာပြန်ရာမှာ သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ဇော်က ကူညီပေးပြီး ဆရာဦးကျော်ဇံသာက တည်းဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။)
ဒီတလော စိတ်ထဲကနေ စာတွေ ရေးနေတာ အများကြီးပဲ..။ အားလုံးကတော့ အန်တီစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ခု အခြေအနေဆီ ဦးတည်တဲ့ အတွေးတွေ ခံစားချက်တွေချည်း ဖြစ်နေတာပေါ့။ ပြီးတော့ ကျမက နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်လေတော့ ကျမရဲ့ စဉ်းစားသမျှက တကယ့်ကို သာမန် ပြည်သူတယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေပါပဲ။ ဆိုတော့.. ဒေါသတွေ… မောဟတွေ.. သောက တွေ.. လောဘတွေ.. မရင့်ကျက်မှုတွေ.. စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ များတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါ အားလုံးက ကိုယ့်ရဲ့ အမှန် တွေချည်းသာ။
ဒီတပတ်ထဲမှာ ကျမ အသက် ၄၄နှစ်ပြည့်ပါမယ်။ အဲလိုတွေးလိုက်တော့ ဒီအသက်အရွယ်ဟာ အန်တီစု မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျမအသက် ၄၄နှစ်မှာ သားကြီး ၁၈နှစ်.. သမီးလတ် ၉နှစ်.. သားအငယ်ဆုံးက ၆နှစ်..။ ခင်ပွန်းက ၃၅နှစ်။ ပြီးတော့ ခုဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုံလုံခြုံခြုံ ရှိတဲ့နေရာမှာ။ ခုအချိန်လေးမှာ ကျမ စိတ်လက်ချမ်းသာရှိနေတာ အမှန်ပါပဲ..။ ပြီးတော့ ကျမ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်လည်း လုပ်နေရတယ်။ ကျမဆက်သင်ချင်တဲ့ ပညာရေးလည်း ဆက်ခွင့်ရတယ်။ ကျမ ကလေးတွေ ပညာရေးလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အေးရပြီ။ ဒါတွေက အတ္တဆိုပေမဲ့ သိပ်များတဲ့ အတ္တတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမ ယုံပါတယ်။ သာမန်မိခင်တယောက်ရဲ့ အတ္တကိုးး။ ကျမခင်ပွန်းပြောသလို ကလေးတွေအတွက် စိတ်အေးရရင် တော်ပါပြီ။ ကိုယ်ကြောင့် သူတို့ခမျာ လူဖြစ်လာရတာ မဟုတ်လား..တဲ့။ ဒီကလေးတွေကို ဘယ်အတွက် မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ခုချိန်မှာ မပြောချင်သေးပါဘူး။ အချိန်စောင့်ကြည့်ကြရုံ.. ကိုယ့်သမိုင်းကို ရေးကြရုံ..။
ပြောချင်တာက အဲဒီလို ကိုယ့်ဘ၀လေးကို စိတ်အေးချမ်းသာရှိလာချိန်မှာပဲ အန်တီစုကို ပိုသတိရပြီး ကိုယ်ချင်းစာ မိတာပါ။ အန်တီစု ၄၄နှစ်ဝန်းကျင်တုန်းကဆို ခင်ပွန်းသည် Dr. Michael Aris က ၉လ ငယ်တာဆိုတော့ ၄၄နှစ်တောင် မပြည့်လောက်သေး။ သားကြီး Alex ကမှ ၁၆နှစ်သား။ သားငယ် Kim လေး က ၁၂နှစ်သား။ ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတယောက်ရဲ့ ဇနီးဘ၀မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေနေရရုံမက.. အန်တီစု ကိုယ်တိုင်က ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ။ ဘယ်လောက် ကျေနပ်စရာကောင်းလဲ..။ အဲဒီ ဘ၀ကို သူ စွန့်ခဲ့တာ.. ဘာအတွက်လဲ.. ဖေဖေ့သမီးမို့ တာဝန်ရှိသတဲ့။ (ခု စာရေးနေရင်းနဲ့ကို ကျမ မျက်ရည် လည်နေမိပါတယ်။) အန်တီက အဲဒီလို ပြောပေမဲ့ တကယ်က ဗမာပြည်တပြည်လုံးကို လွတ်မြောက်စေချင်တာ.. ထွန်းပေါက်စေချင်တာ.. သာယာဝပြောစေချင်တာတွေကလည်း တွန်းအားအနေနဲ့ ပါလို့သာ.. ခုလောက်ထိ ဇွဲခတ်တာပေါ့။ အန်တီကသာ ဖေဖေပြောတာလို့ ညွှန်းပေမဲ့ အဲဒါတွေက သူ့နှလုံးသားထဲက လာတာ မဟုတ်လား..။ ဒါကြောင့်ပဲ အာဇာနည်ပီပီ အလုပ်ကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ဖို့ သူ့ပုဂ္ဂလိကဘ၀ကို စတေးနိုင် ခဲ့တာပေါ့။ ဘယ်သူ သူ့လို လုပ်နိုင်ပါသလဲ..။
ကျမဘ၀မှာ ခုလက်ရှိ အရေးပါဆုံး အထင်ကြီးဆုံး အမြတ်နိုးဆုံး အလေးစားဆုံး သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်… ပါပဲ။ အဲဒီအခါ (နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောတဲ့ စာရေးဆရာမ) တချို့က ကျမကို ပြောဖူးပါတယ်။ မေငြိမ်းက နိုင်ငံရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လောက်ပဲ သိတာကိုးတဲ့။ (မယုံမရှိပါနဲ့.. ကျမစကားကို ကျမ တာဝန် ယူပါတယ်)။ ကျမက ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လောက်ပဲ… လို့ ပြောတယ်ဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက်.. လို့ ပြောလို့ရမယ့်သူ ဘသူ ရှိလဲဟင်.. ပြောပါဦးလို့..။ ဆိုတော့... သူတို့က ဘလာဘလာဘလာတွေ ပြန်ပြောပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ နာမည် တွေတော့ ရယ်စရာကောင်းလို့ မပြောတော့ပါဘူး။ သူတို့က ကျမထက် ပို နီးနီးကပ်ကပ် အန်တီစုအနား နေဖူးသူ တွေ… အန်တီ့အကြောင်း သိသူတွေဆိုပဲ..။ အဲဒါ ကျမ ထွက်မလာခင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းကပါ။ သူတို့ အုပ်စုက ကျမကို ဒေါ်စု ခရေဇီ.. တဲ့။ ကျမ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဂုဏ်တောင် ယူသေး။ ထားပါတော့။
အဲဒီတုန်းကတည်းက ကျမစဉ်းစားနေမိတယ်..။ သူ့ကိုယ်ကျိုး လုံးလုံးမပါဘဲ အနစ်နာခံနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် သတ္တိခဲ အမျိုးသမီးကြီးကို ဘာလို့များ အပြစ်တင်နေကြသလဲပေါ့။ ကြံဖန်ပြီး ပြောကြတယ်...။ စွာတယ်…၊ ခေါင်းမာတယ်…၊ မာနကြီးတယ်…၊ အစွန်းရောက်တယ်… တို့။ ဟုတ်ပြီ.. ဒါဆို.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်နှခါ စွာသလဲ.. ခေါင်းမာသလဲ.. မာနကြီးသလဲ.. အစွန်းရောက်သလဲ.. ဆိုတာ ကျမတို့ စဉ်းစားရမယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန်ဆန်တွေတော့ လာမပြောနဲ့လေ.. ဆောရီးပဲ..။ ပြီးတော့ အဲလို ဝေဖန်နေသူတွေကရော ဘာလဲ.. ဘယ်လိုလဲဆိုတာလည်း သိနေရတော့ ရယ်စရာတောင် ကောင်းနေတာပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာက ဘ၀တခုလုံးကို ပြည်သူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။ အန်တီ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်သက်တာကိုသာ ကျမတို့က စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျမက အန်တီစုနဲ့ ပတ်သက်ရင် အန်တီ့ကို သာမန်လူလို့ မသတ်မှတ်တော့တာကြာပြီ။ သူတော်စင်လို့ကို သတ်မှတ်ထားတာလေ။ သာမန်လူတွေ သူ့လို မလုပ်နိုင်လောက်ဘူး.. လို့ ကျမ ယုံတယ်။ မာသာထရီဇာလို… သူတော်စင်… ။
ကျမထွက်လာတော့ အန်တီစုကို ချစ်သလေးဘာလေးနဲ့ ခုတော့လည်း ကိုယ်လွတ်ရုန်းတယ်.. လို့ စကားတင်း ဆိုကြပါသေးတယ်။ ကျမ ဘာမှ ပြန် မတုံ့ပြန်ပါဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ် အသိဆုံးကိုး..။ ပြောရရင်.. စစ်အစိုးရ ဘယ်လောက် လူမဆန်သလဲ ကျမ သိတယ်.. နောက် ကျမက ဘာမှမဟုတ်မှန်း သိတယ်.. နိုင်ငံရေးကို ဦးတည် လုပ်ဖို့ လိုတဲ့ အရည်အသွေး ကျမမှာ မရှိဘူး.. ကျမ သိတယ်။ ဒါဖြင့် ကျမဘာလုပ်နိုင်မလဲ.. တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ပညာ ကိုယ့်ကလောင်.. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ရတဲ့ နေရာကနေ ရသလောက် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားတယ်။ ကိုယ့်မျိုးဆက်ကို နိုင်ငံသစ္စာဖောက် မဖြစ်အောင်.. နိုင်ငံအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားမွေးမယ်.. ဒါပဲ ကိုယ်တတ်နိုင်တယ်။ သေချာတာက အန်တီစု အပေါ်.. ကိုယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်… ဘယ်တုန်းကမှ သစ္စာ မပျက်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ပြည်တွင်းမှာတုန်းကထက်တောင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့် ၀န်းကျင်လေးအတွက် ပိုလုပ်ပေးနိုင်နေတယ်.. ရပြီ။ ကျေနပ်ပြီ။ ဒီနေရာမှာ အန်တီစု ပြောတာလေး ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။
"If you choose to do something, then you shouldn't say it'sasacrifice, because nobody forced you to do it"
ကျမ ပြည်တွင်းမှာ ရှိစဉ်ကတည်းက စစ်အစိုးရနဲ့ ထပ်တူ အပြစ်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Collaborator တွေထဲမှာ အစိုးရအရာရှိတွေ အကြီးပိုင်းတွေ ပါပါတယ်။ ကျမက ပညာရေးလောကကလာတော့ အဲဒီ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းသူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ အရေးကြီးလှတဲ့ အဲဒီလောကထဲက အကျင့်ပျက် ခြစားတာတွေ.. ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း လုပ်တာတွေက တခြားလောကထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ မြင်ခဲ့တာမို့ ကျမ ဒီဘက် ရောက်တော့ အဲဒီကိစ္စတွေကို တခုချင်း အချက်အလက် အတိအကျနဲ့ ဖော်ထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကျမကို ဆရာကြီး ဆရာမကြီးဟောင်းတချို့က မေငြိမ်းက အပြင် ရောက်မှ ပြောရဲနေလိုက်တာ.. ပြီးတော့ ကိုယ့်ဆရာဆရာမတွေ ကိုယ့်လူကြီးတွေကို သစ္စာဖောက်တယ်.. လို့ လှမ်းပြောပါတယ်။ ကျမ စဉ်းစားတယ်.. ကျမပြောတဲ့ ကိစ္စတွေက လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြဿနာတွေ.. အချင်းချင်းကို ချောက်ချတဲ့ ပြဿနာတွေ.. စာမေးပွဲတွေကို ပစ္စလက္ခတ်အအောင်ပေးနေတာဟာ ပညာရေးစနစ်ကို ဖျက်ဆီးနေတာပဲ ဆိုတာတွေကို အတိအကျ ပြောတာ..။ အမှန်တွေချည်း.. ပြီးတော့ တကယ် မဖြစ်သင့်တာတွေချည်း..။ ဘာလို့ မပြောစရာရှိလဲ..။ ပြီးတော့ အပြင်ရောက်မှ စွာနေတယ်ဆိုတော့လည်း မေငြိမ်းဆိုတဲ့ ကောင်က အထဲမှာ ကတည်းက အဲလိုကိစ္စတွေမှာ စွာလွန်းလို့ ခဏခဏ သတိပေးခံခဲ့ရတာ သူတို့ အသိဆုံး။ (ဂုဏ်လုပ်စရာမဟုတ်ပါ.. အဖြစ်ကိုပြောပြနေတာပါ)။ ပြီးတော့ တကယ်လို့ အပြင်ရောက်တော့မှ စွာတာဆိုတော့ရော.. ဘာဖြစ်လဲ.. အမှန်ကို ပြောနေတာပဲ.. မကောင်းဘူး လား.. မပြောသင့်ဘူးလား (မပြောသင့်ဘူးလို့ ထင်ရင်တော့ အဲဒီ မကောင်းမှုကို သူတို့ အားပေးလို့ပေါ့)။
တကယ်တော့ အပြင်ရောက်တာတောင် မပြောရဲပါဘူး.. ကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုကို ဘာလုပ်မှာ စိုးလို့.. ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ ဒုက္ခလိုက်ပေးမှာစိုးလို့... ဆိုတဲ့သူတွေ အပုံ..။ ကျမမှာလည်း ပူမယ်ဆိုပူစရာအမေအိုကြီးနဲ့ မောင်နှမတွေ တထောကြီးနဲ့ပါပဲ။ (ကျမပြောနေတာ ကျမလို ထွက်လာတဲ့သူတွေပါ။ အလုပ်ထွက်လုပ်သူများ.. ပညာသင်များ မဟုတ်)။ တချို့ဆို Asylum ခံပြီးနေတာတောင် ဘာမှမပြောဘဲ မှိန်းနေတာ။ တချို့ဆို စစ်ဘက်က မိသားစု.. မရှူနိုင် မကယ်နိုင် ပြဿနာတက်တော့ နောက်ဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြီးကပဲ ထောက်ခံပြီး ကယ်လိုက်လို့ Asylum ရသွားတာတွေ..။ ခုကျတော့ မသိသလိုလိုတွေ လုပ်နေကြ။ (အဲဒီ လူတွေကိုပဲ တမင် ရည်ရွယ်ရေးပါတယ်.. ခက်တာက ဒင့်တို့က စာမဖတ် ပေမဖတ် ကိုယ့်ကောင်းစားရေးပဲ လုပ်နေတဲ့ဟာတွေ.. ရေးရင်း ဒေါသထွက်လာပြီ)။ ကိုယ်က Asylum နဲ့ နေတာ မဟုတ်လို့ လူပါးဝပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ် လုံအောင် နေကြစေချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ဘာပဲပြောပြော ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရပါတယ်။
ဒါတွေ ရေးနေဖြစ်တာက ဒီလိုပါ။ အန်တီစုနဲ့ မွေးရက်နီးတဲ့ ကျမက မွေးနေ့နားနီးလာတော့ အဝေးကြီးက အမေအိုကြီးကို သနားပြီး သတိရမိတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ ပြောစကား နားမထောင်တဲ့ သမီးကြီးအတွက် သောကတွေ ရောက်နေလေရှာမလား..။ ဘာပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်နေရသေးလဲ.. ဆိုတာတွေ တွေးနေမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေဒီယိုကနေ ကိုယ့်အသံလေး ကြားနေရင်တော့ အော်.. ငါ့သမီးကြီး လူ့လောကထဲ ရှိနေပါသေးရဲ့ လို့တော့ အမေ ဖြေသာမှာပေါ့လေ..။ အဲလို တွေးမိတော့ အန်တီစုကို ပိုသတိရပါတယ်။ လေးစားမြတ်နိုးစရာကောင်းလှတဲ့ ခင်ပွန်း နေမကောင်းလို့မှ မပြုစုရတဲ့ ဘ၀...။ ခင်ပွန်းဆုံးတော့ အန်တီ စာလေးတစောင်ရေးတာ စိတ်ထိခိုက်စရာ.. ခုကြုံတုန်း အမှတ်တရ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
``On behalf of my sons, Alexander and Kim, as well as on my own behalf, I want to thank all those around the world who have supported my husband during his illness and have given me and my family love and sympathy."
``I am so fortunate to have suchawonderful husband who has always given me the understanding I needed. Nothing can take that away from me.''
Aung San Suu Kyi, March 27, 1999
သားလေးတွေခမျာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက မိခင်မဲ့ ကြီးပြင်းရတာ..။ နောက် ဖခင်ပါ မဲ့ကြရ။ ခမျာလေးတွေ မှာ ခု သားသမီးတွေ ကိုယ်စီနဲ့။ အန်တီကရော မြေးလေးတွေကို မတွေ့ချင်ဘဲ ရှိမလား။ ခုတော့ သတင်းလေးတောင်မှ မကြားရတဲ့ အခြေအနေမှာ တယောက်တည်းဘ၀နဲ့ မွေးနေ့ရက်တွေ အန်တီ ဖြတ်သန်း ခဲ့ရတာ ၁၃ကြိမ် ရှိရော့မယ်..။
ဒီကြားထဲ တယောက်တည်းသော သွေးသားရင်းချာ အစ်ကိုဖြစ်သူကြောင့်လည်း အရှက်ရ။ (မှန်တာပြောရရင် ဦးအောင်ဆန်းဦးအကြောင်းကို ကျမ မရေးချင်ပါ.. သူ့အကြောင်း တွေးရင် သူ့အစား ရှက်ရှက်လာပြီး စိတ်ထဲ ကျက်သရေ ယုတ်တယ် ထင်မိတော့ သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ မေမေကြီးဒေါ်ခင်ကြည်ကို အားနာလို့ပါ)။ မရေးဘူးဆိုမှ စိတ်ထဲ ကလိကလိ ဖြစ်လာသေး။ (ကျမက သိပ်ရယ်ရတာ.. အဲဒီ ကျမ မုန်းတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တာဆို နာမည်တောင် စာထဲ ထည့်မရေးချင်ဘူး.. စိတ်ထဲ သနတယ်။ သူ့မိန်းမကြီးဆို ပိုဆိုးတယ်.. ရွံကို ရွံတာ… (အားတော့နာပါရဲ့)။ ဒါလည်း ထားပါတော့ 
တကယ်တော့ ကျမရဲ့ မွေးရက်က Che Guevara နဲ့ တရက်တည်း။ ဟီး… လူချင်းကတော့ တခြားစီ..။ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် စိတ်ဓာတ်ခိုင်ကျည်တာချင်း တခြားစီ..။ အဲဒီအခါ ခု မွေးနေ့ နီးလာချိန်မှာ ကျမ တွေးနေမိတယ်.. ကျမက လူတွေကို ဘာနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်ပါလိမ့်လို့။ ဒီတော့မှ ကျမ သေချာသိလာတယ်။ ကျမက အများအတွက် တကယ် အနစ်နာခံကြိုးပမ်းတဲ့.. သတ္တိရှင်တွေကို အလေးစားဆုံး..။ နောက်တဆင့်.. ကိုယ့်အလုပ်တာဝန်ကို ကျေပြွန် ကြိုးစားတဲ့သူ..၊ နောက်တဆင့် စိတ်ဖြူစင်ရိုးသားပြီး သူများအပေါ် ခုတုံးမလုပ် အသုံးမချတဲ့သူ..၊ နောက်တဆင့် တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးချမ်းသာယာအောင် ပံ့ပိုးသူတွေ..၊ နောက်တဆင့်.. ကိုယ့်မိသားစုအပေါ် စိတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ.. ကိုယ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ… တာဝန်ကျေသူ…၊ နောက်တဆင့်.. သူတပါး စိတ်နှလုံးကို ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်သူ.. အဲလို လူတွေကို ကျမက အထင်ကြီး လေးစား သဘောကျ တန်ဖိုးထားတာ ဆိုတာပါပဲ။
အန်တီစုလို.. တည်ကြည်.. ဖြောင့်မတ်.. ကိုယ်ကျိုးစွန့်.. အနစ်နာခံ… ပညာတတ်.. ပညာရှိ.. တရားသိ… သတ္တိကောင်း.. တော်မှန်… အဂတိမရှိ… ကျက်သရေရှိ(သိပ်အရေးမကြီးပေမဲ့ အန်တီ့မှာ ရှိနေတဲ့ ဂုဏ်တရပ်မို့ ထည့်ပြောတာပါ).. ကမ္ဘာအသိအမှတ်ပြု.. လူထုလက်ခံမှု… တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထောက်ခံမှု… တိုင်းပြည်ပေါ် ထားတဲ့ စေတနာ.. မေတ္တာတရား..။ အဲဒီ ကျမ လက်လှမ်းမီလောက်လေးပဲ ပြောပြထားတဲ့ အရည်အသွေး လောက်ပဲ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ထဲက တစုံတယောက်မှာ ရှိလာတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကို ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ် လိုက်ဖို့ ကျမကတော့ အဆင်သင့်ပါ..။
ကဲ… ၂၀၀၆- ၂၀၀၇ ခုနှစ်များဆီတုန်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖယ်ပြီး စဉ်းစားမှ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ နီးစပ်မယ်”လို့ နိုင်ငံတကာကို လှည့်ပြီး Lobby လုပ် စည်းရုံးပြောဟောခဲ့သူ ပညာရှင်ဆိုသူများဆီမှာများ အဲလို ခေါင်းဆောင်ကောင်း အရည်အချင်းရှိသူ အဆင်သင့် ရှိနေပါပြီလားရှင်.. ခုလို တိုင်းပြည်အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စား ဒီမိုကရေစီအရေးကို ဦးဆောင်နိုင်မယ့်သူ ဆိုတာကြီး…. ထွက်လာဖို့.. ဖော်ထုတ်ပြသတော့ဖို့ အချိန်တန်နေပြီ မဟုတ်လား ရှင်…။
(မှတ်ချက်.. ဒီတလော ဗမာပြည်က စစ်ဘီလူးတွေက အန်တီသိက္ခာကျအောင် ပုံတွေ ထုတ်နေ.. အကိုလုပ်သူရဲ့ အိမ်အမွေမှုက တမျိုး.. ဒီကြားထဲ ဒေါ်စုက ဟိုလိုမှမလုပ်တာကိုး .. ဟိုလိုလုပ်ပါလားလို့ ဒီလို လုပ်ပါလား လို့ဆိုတာတွေ တိုးတိုး တိုးတိုးကြားရတွေ.. ရေဒီယိုတွေမှာ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုသူတွေရဲ့ အကြားအမြင် ဗဟုသုတ ပေါချာချာ လေကြီးကြီး တွေကို သူတို့အစား ရှက်ရှက်နဲ့ နားထောင်နေရတာတွေ.. ကိုယ့်အချင်းချင်း အပုပ်လှည့်ချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ပြန်ကြည့်ပြီး ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိသူတွေကို စိတ်တိုတိုနဲ့ ဒီစာကို ရေးမိတာပါပဲ)။
at June 11, 2009 15 comments:
ရွာသားလေးက နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်…လို့ Tag တော့ တကယ်ကြီး ကြီးပြင်း လိုက် ရမယ့် အနှစ် ၂၀ကို တွေးပြီး ရင်ထဲ လေးတေးတေး ဖြစ်နေမိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်မှ ဘ၀စတတ လူတွေဆိုတော့ ရေးအားရှိသပေါ့..။ ကျမမှာတော့ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ဟာ တကယ့်ကို When I’m 64 ပါ..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီဇွန်လမှာ ကျမ အသက် ၄၄နှစ်ပြည့်တာလေ။
မနှစ်တုန်းကတော့ အန်တီစု ၆၃နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် ရည်စူးပြီး ကျမ စာတပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ တုန်းကတော့ ၂၀၀၉ ဟာ အန်တီစု အသက် ၆၄နှစ်ပြည့်မယ့်နှစ်..။ ပြီးတော့ တရားသဖြင့်အတိုင်းဆိုရင် အန်တီ အကျယ်ချုပ်ဘ၀ကနေ လွတ်ကို လွတ်ရမယ့်နှစ်လို့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့…။ အန်တီစုရဲ့ ၆၄နှစ်ကို ရည်စူးပြီး ကျမကြိုက်တဲ့ Beatles တေးဂီတအဖွဲ့ရဲ့ when I am 64 သီချင်းလေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒီနေရာမှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုတော့ မထင်မှတ်ပါဘဲ ရွာသားလေးက Tag လေတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ၆၄နှစ်ဆီကို မှန်းပြီး ရေးရ ပါတော့မယ်။ ကျမ အသက် ၆၄ထိ နေခွင့်ရနေဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့..။ (အဲဒီသီချင်းလေး မကြာခဏဆိုတဲ့ ကျမအဖေ ကတော့ အသက် ၅၆နှစ်မှာ ဆုံးနှင့်ရရှာပါတယ်)။
သားကြီးတောင် အသက် ၄၀နားနီးနေပြီ။ သားအငယ်ဆုံးလေးတောင် ၂၆နှစ်ရှိပြီပဲ..။ အသက် အစိတ်ကျော် ဆိုတော့ ပုခက်ချိတ်နေလောက်ရောပေါ့။ အသက် ၃၀ သမီးလတ်ကလည်း တော်တော် အားကိုးရနေလောက်ပြီ။ ပြီးတော့ ကျမ ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်မယ့် မြေးတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရနေမလဲ…။ တိုင်းတပါးမှာမို့ မြေး တွေက when I am 64 ထဲက Vera, Chuck နဲ့ Dave တို့လို အသားရောင် အဖြူတွေ အနီတွေ အ၀ါတွေ အမည်းတွေလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးမှန်သမျှကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းမှာချည်းပါပဲ..။ ဒါပေမဲ့ မြေးတွေက အဖိုးကို ပိုချစ်မယ် ထင်ပါတယ်..။ အဖိုးက သူတို့ကို အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ထိန်းမယ့်သူလေ..။ ဖွားအေ ကျမကတော့ ခပ်အေးအေး ခပ်ဖယ်ဖယ် နေတတ်သူ ဆိုတော့..။ အားလပ်ရက်လေးတွေမှာတော့ သားသမီးတွေ မြေးတွေနဲ့ နေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာရေးချိန် စာဖတ်ချိန်တွေဆိုရင်တော့ နားအေးပါးအေးပဲ နေချင်တယ်။ အဖိုးကြီးအဖွားကြီး နှစ်ယောက် လဘက်ရည်လေးသောက်…။ စာအုပ် တယောက် တအုပ်စီနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်..။ ကျမက စာရေးနေတုန်း သူက ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်..။
သူကတော့ နောင် အနှစ် ၂၀မှာ အသက် ၅၅နှစ်ဆိုတော့ သိသိသာသာ ဖျတ်လတ်တုန်း ရှိဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျမကတော့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာပဲ နေချင်ပါသေးတယ်။ ခုလို အသံလွှင့်ဌာနတခုခုမှာ မဟုတ်ရင် တောင် ကျောင်းတကျောင်းမှာ မြန်မာစာဆရာမ အဖြစ်.. ဒါမှမဟုတ် ပြည်ပမှာ ကိုယ်ဆည်းပူးခဲ့သမျှ ပညာတွေ အတွေ့အကြုံတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံက မျိုးဆက်သစ်တွေဆီ တနည်းနည်းနဲ့ ဖြန့်ဝေရတဲ့ အလုပ်တခုခု လုပ်နေချင်သေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ဥပဒေအရ အသက် ၇၀ထိ အလုပ်လုပ် နိုင်သေးရင် လုပ်ခွင့်ရနေမှာကိုး။ သားသမီးတွေ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးလည်း နားမယ်ဆိုရင် နားလို့ ရပြီ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ် မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ကျမ နေနိုင်မယ် မထင်..။ ပြီးတော့ စာအုပ်တွေ ရေးချင်သေးတယ်။ Vacation ရက်တွေမှာ အဖိုးကြီးနဲ့အတူ ခရီးတွေ စုံတကာစေ့ လျှောက် ထွက်ရင်း စာအုပ်တွေ ရေးချင်တာ..။ ၀တ္ထုတွေပေါ့..။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လူမျိုးစုမျိုးစုံ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအကြောင်းကိုပဲ ရေးချင်ပါတယ်။
နောင်အနှစ်၂၀မှာတော့ ကျမ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်နေလို့ ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်..။ အဲလိုဆိုရင်တော့ အဲဒီခေတ်ထဲ ရာသီဥတုတွေ ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ဆိုးလှပြီဆိုတာတောင် ကမ္ဘာပေါ်က တခြားဒေသတွေထက် အများကြီး သာတောင့်သာယာ နေပျော်စရာကောင်းမှာ သေချာတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက ကျမချစ်တဲ့ ကရင် ပြည်နယ် ထဲက မွန်ရွာလေးမှာ ကျမ မကြာမကြာ သွားနေဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဇန်န၀ါရီ… ပြာသိုလဆိုရင်တော့ ပုဂံ အာနန္ဒာ ဘုရားပွဲ သွားမယ်။ ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့ ကမ်းခြေတခုခုပေါ့..။ ချောင်းသာဆိုရင်တော့ ကျမ ဇာတိ ပုသိမ်နဲ့ နီးမယ်။ မတ်လမှာဆိုရင်တော့ မေမြို့ဘက် တက်မှာပေါ့။ ကျောက်မဲ သီပေါဘက်လည်း ဖေဖေ့ အလွမ်းပြေ သွားချင်သေးတယ်။ ဧပြီဆိုရင်တော့ မန်းလေးသင်္ကြန် ကျရင် ကျ..။ ဒါမှမဟုတ် မန်းလေးသင်္ကြန်ကို အလွမ်းပြေ ငေးရင်း စစ်ကိုင်းမှာ တရားစခန်း ၀င်ရင် ၀င်..။ မေလဆိုရင်တော့ မိုးတွင်း တတွင်းလုံး စားချင်စဖွယ် အစားအသောက်တွေ ပေါလှတဲ့ သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေးက ကျမတို့ရွာလေးဆီ အရောက် ပြန်မှာပေါ့။
မိုးအေးအေးမှာ သံလွင် မြစ်ရေဖွေးဖွေးကို မြင်နေရတဲ့ အိမ်ရှေ့ဝရံတာမှာ စာရေးခုံလေးချပြီး စာတွေ ရေးမှာပေါ့။ အဖိုးကြီးးလည်း သူ့ရွာမှာ အဲဒီတော့မှ အတိုးချပြီး ပျော်ပျော်နေလိမ့်မယ်။ လယ်ထဲတောင် သတိတရ ပြန်ဆင်းချင်ဆင်းလို့ ရသေး။ ဒီကြားထဲ တပည့်ဟောင်းတွေ အလွမ်းပြေ တနာရီခရီးပဲ ဝေးတဲ့ မော်လမြိုင်ကို သွားမယ်။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘ၀ အလွမ်းပြေ ကျိုက္ခမီ စက်စဲသွားမယ်။ မုဒုံ ကျိုက်မရော သွားမယ်..။ အဲသလိုပဲ ကျမတို့ အတိတ်ခြေရာတွေ ထပ်ခဲ့ရာ ဘားအံဘက် လည်ရင်း ကျုံဒိုး ကော့ကရိတ် မြ၀တီ တက်မယ်..။ မဲဆောက်ဘက် အမှတ်တရ ကူးရင်း ထိုင်းစာ သွားစားမယ်..။
သီတင်းကျွတ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရွာလေးဆီ အရောက်ပြန်မှပါ..။ ရွာမှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ရှိတယ်လေ..။ ယောက္ခမတွေ ရှိနေသေးရင် အသက် ၈၇နှစ်မို့ အကန်တော့ ခံရမှာ..။ တကယ်လို့ ကျမအမေ ရှိနေသေး ရင်လည်း ၈၇နှစ်ပေါ့..။ အမေ့ဆီလည်း ပြေးကန်တော့ ဦးမှာ..။ အန်တီစု ရှိနေသေးရင်တော့ ၈၄နှစ်…။ အန်တီစု ကိုလည်း သွားကန်တော့ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျမတို့ တိုင်းပြည်လည်း အေးချမ်းနေလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့် ပါရဲ့။
နိုဝင်ဘာဆိုရင်တော့ မြေးတွေကို တောင်ကြီးမီးပုံပျံပွဲ ပို့ချင်တယ်။ ပြီးတော့ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဖူးမယ်..။ အေးဆေးတိတ်ဆိတ်ပြီး ရှုမျှော်ခင်းတွေနဲ့ ပန်းတွေ ပန်းချီကားလို လှတဲ့ ကလောကိုတော့ မြေးတွေ သိပ် သဘောကျမယ် ထင်တယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ဆိုရင်တော့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးချိန်ပေါ့..။ အဲဒီအခါကျရင်တော့ ဆွေမျိုးတွေ အကုန်လုံးကို ကုသိုလ်ဖြစ် စရိတ်ခံပြီး ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဖူးချင်သေးတာ..။
ကဲ… နောင် အနှစ် ၂၀အတွက် ကျမ သိပ်များ လောဘကြီးနေသလား..။ သေချာတာကတော့ အဲသည် နောင် အနှစ်၂၀ထိ ကျမ.. ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ ရှိနေခွင့်ရနေသေးရင်… Beatles ရဲ့ When I am 64 ကို ညည်းဆိုလေး ဆိုရင်း သူ့ကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ဖို့ကိုတော့ မမေ့မလျော့ လုပ်ရပေလိမ့်မယ်..။
When I am 64 (The Beatles)
When I'm sixty four …
When I'm sixty four…
(ရွာသားလေး Tag ထားတာ အကြာကြီးနေမှ ရေးဖြစ်တာဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ် tag မလုပ်တော့ပါဘူး နော်)။
at June 07, 2009 23 comments:
၅၄၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်
၂၈ရက်နေ့ မေလ ၂၀၀၉ ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က လွှင့်ခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ Program ပါ။ ဖုန်းဆိုးရဲ့ ကဗျာကို ရွတ်ထားတာပါ..။
at June 01, 20099comments: